के तपाईमा रगतको कमी छ ? यी चिज खानुहोस् « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
के तपाईमा रगतको कमी छ ? यी चिज खानुहोस्
शरीरमा आइरनको कमी हुँदा रगतको कमि हुने गर्छ । यो रोग लागेका व्यक्तिको शरीरमा रगतको कमी हुन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार नेपालमा प्रत्येक छैटौं व्यक्ति एनिमियाबाट पीडित छन् । उही समयमा ५५ प्रतिशत महिलामा एनिमिया हुन्छ ।
पुरुषको तुलनामा महिलालाई एनिमिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार महिनावारीको समयमा अत्याधिक रक्तस्रावका कारण महिलामा आइरनको कमी हुने गर्छ । एकै समयमा, कलेजोमा फलामको कमीले सिरोसिसको जोखिम बढाउँछ । यो रोग धेरै खतरनाक छ ।
समयमै उपचार गरिएन भने क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । यसका लागि महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, शरीरमा रगतको कमीलाई हटाउन यी चीजहरूलाई खानामा समावेश गर्नुपर्छ ।
शरीरमा रगतको कमी हटाउन यी चीज खानुहोस् ।
शरीरमा रगतको कमी हटाउन दैनिक बिहान बेलुका किसमिस खानुहोस् । किसमिसमा आइरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसको सेवनले शरीरमा रगत उत्पादन हुन्छ । यसले शरीरमा रगतको कमीलाई हटाउँछ ।
दालमा आइरन, फोलिक एसिड, प्रोटिन, फाइबर, पोटासियम, म्याग्नेसियम, फोलिक एसिड र एन्टिअक्सिडेन्टको गुण पाइन्छ । यसको सेवनले शरीरमा प्रोटिन र आइरनको कमी हट्छ । यसका लागि खानामा हरियो मटर, किडनी बीन्स, बदाम, एस्पारागस, एभोकाडो, सलाद, मीठो मकै, पालक, मटर, किडनी बीन्स र दाल समावेश गर्नुहोस् ।
गुड़लाई फोलिक एसिड र आइरनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । यसको सेवनले आइरनको कमीलाई पनि हटाउन सकिन्छ । यसका साथै मधुमेहको जोखिम पनि कम हुन्छ । यसका लागि महिलाहरूले आफ्नो आहारमा गुड़ समावेश गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २९, २०७९ आईतबार ६ : ५४ बजे